खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा अध्यक्ष उम्मेदवार सनबहादुरको विकास योजनासँगै घरदैलो अभियान | संघीय पोस्ट :: SanghiyaPost
खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा अध्यक्ष उम्मेदवार सनबहादुरको विकास योजनासँगै घरदैलो अभियान
खोटाङ, २ असार । खोटाङको साकेला गाउँपालिकाको अध्यक्षका लागि सनबहादुर राईले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । साविक रतन्छा गाविसको पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका राईले साकेला गाउँपालिकाको अबको विकास र समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योजना ल्याएका छन् ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालको तर्पmबाट गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका उनले चुनावी अभियान र घरदैलोसँगै मतदातासामू आफ्ना योजना सार्वजनिक गरेका छन् ।
च्याडाँडाँ, रतन्छा, मात्तिम र खिदिमा जोड्ने मुख्य सडक दुई वर्षभित्र कालोपत्रे गर्ने ।
च्यानडाँडा, रतन्छा, मानेभन्ञ्याङ, बोपुङ, पुङमा, छितापोखरी, सिमपानी, रसुवा हुँदै गाइघाट तराई मधेसको सडकको पहुँच नजिक बनाउने ।
हरेलोडाँडाबाट डाँडागाउँ पुछार सडकको स्तरोन्नति गरी नियमित संचालन गर्ने ।
हरेलोडाँडा छापटोल कुन्तुङ हुँदै पेलुङ निर्मलीडाँडासम्म सडक निर्माण गर्ने ।
चखेवा मलुवापोखरी मेरुङ सडक निर्माण गर्ने ।
दिक्तेल, मात्तिम, टेम्मा सडकको स्तरोन्नतिमा सम्बन्धित पक्षलाई परिचालन गर्ने ।
दिक्तेल, साप्सु, चुम्लुङ, मानेभञ्ज्याङ, खिदिमा पान्धारे सडकको स्तरोन्नति गरी नियमित सञ्चालन गर्ने ।
कात्तिके पारुङ, मानेभञ्ज्याङ सडकको स्तरोन्नति गरी नियमित सञ्चालन गर्ने ।
कात्तिकेडाँडाबाट तेर्साे सरस्वती मावि हँुदै मानेगाउँ, आहाले हुपावु सडक विस्तार गर्ने ।
पाङदुरे, आहाले हुपापु सडकको स्तरोन्नति गरी नियमित संचालन गर्ने ।
नौलाखर्क हुपापु सडकको स्तरोन्नति गरी संचालन गर्ने ।
पुङमा, रिक्सुमगुम्वा चित्रे सडकको स्तरोन्नति नियमित संचालन गर्ने ।
पुङमा, किवा, बोरा, मखमले सडकलाई पान्धारेमा जोड्ने ।
किवादेखि खिदिमा र मखमले, सोल्मा खिदिमा सडक जोड्ने ।
ढाँडे, डम्बरे, टेम्के पर्यटन सडक निर्माण गर्ने ।
रतन्छा, सुर्के, पातलपानी, मपारुङ, डम्बरे पर्यटन सडक निर्माण गर्ने ।
मबु चेकापा पाटीभञ्ज्याङ सडक निर्माण गर्ने ।
डाँडागाउँबाट लामदुवाली सडक जोड्ने ।
दारुलाटारबाट बुतेपा सडक जोड्ने ।
बुतेपा सासिप लामदुवाली सडक जोड्ने ।
धिकुर्तुङ, दारिमटोल सडक जोड्ने ।
पारुङ धिकुर्तुङ सडक जोड्ने ।
पारुङ कोक्लीङटार सडकको स्तरोन्नति गर्ने ।
बेसी सडक कोरिडोर टेम्मा मार्से–मात्तिम, डाँडाटोल–कात्तिके–पिनालाखा–साल्मे बुतेपा–मबु डाँडागाउँ–क्षेतीखाम लामाखु सडक निर्माण गर्ने ।
प्रत्येक घरधुरीमा विद्युत आपूर्ती नभएको बेला प्रयोग गर्न सोलारबत्तीको वितरण गर्ने ।
च्यानडाँडा, रतन्छा, खिदिमा र मात्तिमका बाँकी बस्तीहरूमा विद्युतको केन्द्रीय प्रशारण लाइन वर्षदिन भित्रमा जोड्ने ।
हाल संचालनमा रहेको साना जलविद्युतको मर्मत सम्भार र फलामे पोल पूर्ण रुपमा व्यवस्था गर्ने ।
गाउँमा उत्पादित साना जलविद्युत आयोजनाको कर्मचारीहरूको तलव भत्ता तथा सेवा सुविधा गाउँपालिकाबाटै व्यवस्था गर्ने ।
गाउँपालिकाभित्र संचालित सबै ठूला तथा साना कुलोहरूको मर्मत संभार गर्ने ।
नयाँनयाँ सिंचाइका प्रविधिहरू प्रयोगमा ल्याउने ।
तावाखोलाको कटानमा परेको पंचनहर, गाउँफर्के, धँगेरी र चतावु लगायत कुलोहरू, रुपुवाँ खोलाको कटानमा परेको बतासे लगायत कुलोहरू र मखुवा, बेलीया खोलामा भएका कुलाहरू सम्बन्धित विज्ञहरूको सुझाव र सल्लाह अनुसार पुनःनिर्माण गर्ने ।
हरेक वडामा जनसहभागितामा जलाशयहरू निर्माण गरी पानीको स्रोतको आवश्यक संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
जलाधार क्षेत्र तावा भन्ज्याङ, महांकाल क्षेत्र, पाटीभन्ज्याङ, हातिसुँडे, चखेवाभन्ज्याङ, मलुवापोखरी, टुङकु क्षेत्र, सिमखर्क, साप्सुधापलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी पानीको स्रोत वृद्धिको योजना ल्याउने ।
रुपुवाखोला साविक रतन्छा–१ मबु निमालुङ र च्यानडाँडा ८ डाँडागाउँ जोड्ने ।
साप्सुखोला च्यानडाँडा–८ र निर्मलीडाँडा–८ बेंसीटोल जोड्ने ।
बेलीयाखोला बेछुरामा रतन्छा र मबु जोड्ने ।
बेलीयाखोला ससाखुरमा बुतेपा र मबु पुच्छार जोड्ने ।
साब्जुखोलामा कुन्तुङ र छापगाउँ जोड्ने ।
बादुङखोलामा च्यानडाँडा र सेखुवा जोड्ने ।
तावाखोलामा मात्तिम मानेगाउँ सल्लेरीबाट धिप्लुङछाँगा मालबासे जोड्ने ।
तावाखोला पत्राङ्गेटार, साप्सुखोला लामीदुवालीमा मोटरेवल पक्कीपुल निर्माण गर्ने ।
गत सालको बाढीले भत्काएको पुलहरू पुनःनिर्माण गर्ने ।
खानेपानी तथा सरसफाइ
प्रत्येक घरमा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्ने ।
घरभित्रै धारा अभियान लागु गर्ने ।
साकेला गाउँभरि घरघरमा सुन्दर फुलबारी अभियान चलाउने ।
स्थायी समाधानका लागि खानेपानी संस्थान स्थापना गर्ने ।
उत्कृष्ट सरसफाइयुक्त घर र टोललाई पुरस्कृत गर्ने ।
अर्थतन्त्र र जीवनको आधार कृषि भएकाले पहिलो प्राथमिकतामा राखी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने ।
कृषिलाई पूर्ण अर्गानिक बनाउँदै लाने ।
अर्गानिक खेतीलाई चाहिने मलको ब्यवस्था भलपानी, सोतर, पतकर, गोबर र पिसाबलाई ब्यबस्थित तथा
बैज्ञानिक तरीकाले उपयोग गर्ने ।
कृषि प्राविधिक उत्पादनका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने ।
उत्पादित खाद्य वस्तुहरूलाई सुरक्षित भण्डारण, बजार व्यवस्थापन र उचित मूल्य निर्धारण गरी कृषकहरूको
आम्दानीको स्रोत बढाउने ।
उत्कृष्ट किसानलाई वार्षिक पुरस्कार अनुरुप एक लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने ।
कृषिमा व्यवसायीकरण गर्न तालिम, सहुलियतमा ऋण र प्रविधि प्रदान गरी प्रतिघरधुरी वार्षिक आम्दानी रु ५
लाखभन्दा बढी पुर्याउने ।
कृषि बीमा, कृषि बजारको स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने ।
लेक, कछाड र बेसीका रेन्जहरूमा उपयुक्त खाद्यान्नबाली, नगदेबाली र फलफूल उत्पादनको योजना ल्याउने
माटोको परीक्षण गरी त्यसको उपचार र स्थानीय मलखादलाई प्रोत्साहन गर्ने ।
व्यवसायिक पशुपालनका लागि गाउँपालिकाबाट अनुदानको व्यवस्था गर्ने ।
पशुपालन प्रवद्र्धनका लागि पशु स्वास्थ्यकर्मी र औषधि उपचारको सुलभ व्यवस्था गर्ने ।
तावाखोला, सोल्मा, खिदिमा क्षेत्रमा रेन्बो ट्राउट माछाको उत्पादन उद्योग सञ्चालन गर्ने ।
अलैंची, फलफुल(सुन्तला, नासपाती, किवी आदि) र जडीबुटीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी विशेष कार्यक्रम
संचालन गर्ने ।
खिदिमा र च्यानडाँडालाई तरकारी तथा बीउ उत्पादन पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने ।
च्यानडाँडा र खिदिमालाई आलु र चियाको पकेट क्षेत्रको रुपमा विकास गरी आलुलाई ब्रान्डिङ गर्ने ।
किसानको थप आम्दानी र पूर्ण रोजगारीको लागि तथा पर्यटक वृद्धिका लागि खेतीमै होमस्टे पर्यटन विकास
साकेला गाउँपालिकामा गाउँपालिकास्तरीय विशेषज्ञ डाक्टरहरूसहितको सुविधा सम्पन्न सरकारी अस्पताल
सञ्चालन गर्ने ।
प्रत्येक वार्डमा सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य केन्द्र र प्रसुति गृह सञ्चालन गर्ने ।
प्रशुति गृहमा सुत्केरी गराउनेहरूलाई पोषण तथा उपचार खर्चवापत रु पाँच हजार उपलब्ध गराउने ।
७० वर्ष माथिका सबै जेष्ठ नागरिकहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार तथा घरघरमा घुम्ती उपचार सेवाको
एकल महिला, विधवा, अपांग, वृद्धावृद्धहरूलाई उपलब्ध गराइने भत्ता वृद्धि गर्ने ।
राज्यले व्यवस्था गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता घरघरमा पु¥याउने ।
प्रत्येक तीन हजार नागरिकका लागि दुई जना दक्ष स्वास्थ्यकर्मी (डाक्टर)को व्यवस्था गर्ने ।
अनमी, अहेब अध्ययनका लागि छात्रावृत्तिमा गाउँपालिकाले सहयोग गर्ने ।
प्रत्येक नागरिकलाई अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गर्ने ।
आपतकालीन सेवाको लागि एम्बुलेन्स सेवा संचालन गर्ने ।
स्वास्थ्य कोषको स्थापना गरी विपन्न वर्गलाई निशूल्क उपचार सेवा दिने ।
शिक्षालाई आर्थिक विकाससँग जोड्न ब्यवहारिक, बैज्ञानिक र प्रविधिसम्पन्न बनाइनेछ । यसको लागि हालको पाठ्यपूस्तकमूखी शिक्षालाई पाठ्यक्रम, विज्ञान र प्रविधिमुखी बनाउने ।
पर्यटन विकास र रोजगारको लागि नभइ नहुने अंग्रेजी, हिन्दी र चाइनीज भाषालाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने ।
गाउँपालिकामा अहेव, जेटीए, अनमी, सवओभरसीयर, उद्यम विकास, सामाजिक परिचालक उत्पादन गर्ने र प्राविधिक एवम् व्यवसायमूलक शिक्षालय संचालन गर्ने ।
प्रत्येक वार्डमा रहेको विद्यालय र कलेजहरूलाई भौतिक साधनले मजबुत बनाइनुको साथै खेल तथा अध्यापन सामाग्रीहरू पर्याप्त मात्रामा व्यवस्था गर्ने ।
बाल विकास केन्द्र र कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयमा नियमित खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाउने ।
प्रत्येक विद्यालयमा वैकल्पिक उर्जासहितको व्यवस्था गरी कम्प्युटर शिक्षा दिने । आवश्यक कम्प्युटर शिक्षक दरवन्दीको व्यवस्था गर्ने ।
प्रत्येक विद्यालयमा मातृभाषा अध्ययन अध्यापनका लागि सम्बन्धित भाषा शिक्षकको दरवन्दीको व्यवस्था गर्ने ।
साकेला क्याम्पसको व्यवस्थापन र स्तरोन्नति तथा थप विषयहरूको अध्ययन अद्यापनको व्यवस्था मिलाउने ।
स्कुल तथा कलेजहरूमा व्यवस्थित पुस्तकालयको प्रवद्र्धन गर्ने ।
विद्यमान घोकन्ते एवम् सैद्धातिक शिक्षामात्रै दिने पाठ्यक्रमहरूलाई परिवर्तन गरी सैद्धान्तिक एवम् व्यवहारिक दुवै थरिको ज्ञान र प्रविधि दिने पाठ्यक्रम बनाएर लागू गर्ने ।
भाषा तथा संस्कृति
सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिलाई समान महत्व दिई बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक केन्द्रहरूको स्थापना गर्ने ।
आर्थिक विकासलाई नभइ नहुने अन्तर्राष्ट्रिय भाषा सिकाइलाई छुटाइने छैन ।
साकेला गाउँपालिका भित्रका देवाली गर्ने सबै स्थलहरूलाई व्यवस्थित गर्ने ।
साकेला गाउँपालिका भित्रका प्रत्येक वडामा सुव्यवस्थित पार्क बनाउने ।
साकेला गाउँपालिका भित्रका गुम्बा र मानेहरूको निर्माण, मर्मत संभार तथा व्यवस्थापन गर्ने । भएका
मठमन्दिरहरूको मर्मतसंभार र व्यवस्थापन गर्ने ।
सरकारी कामकाजको निमित्त खस नेपाली भाषा र स्थानीय मातृभाषा दुवैलाई स्थान दिने ।
स्थानीय कला, संस्कृति, गीत, संगीतको संरक्षण, विकासमा जोड दिने ।
स्थानीय सामुदायिक वनहरूको समूचित संरक्षण एवम् व्यवस्थापन गरी त्यसबाट प्राप्त हुने स्रोत साधनहरूलाई सरल र न्यायोचित वितरण गर्ने ।
टेम्के, सेल्मेको वरिपरि रहेको भूभागलाई जडीबुटी उत्पादन क्षेत्र बनाउने ।
कृषकहरूलाई दुःख दिने बाँदर लगायतका वन्यजन्तुहरूलाई नियन्त्रण नियन्त्रण वा बैकल्पिक खेतीको ब्यबस्था गरिनेछ । वन्यजन्तुहरूबाट प्रभावित बस्तीहरूमा बैकल्पिक बाली नभएमा आर्थिक नोक्सानी र लाभको आधारमा हेरालु कर्मचारी (वाली रक्षक) व्यवस्था गर्ने ।
चखेवा भन्ज्याङ आसपास वनस्पती उद्यानको स्थापना गर्ने ।
थप बृक्षारोपण गरी सेल्मे–टेम्के–मेरुङ–मैयूँ वनश्रृंखलाहरूलाई जोड्ने ।
स्थानीय एफएम रेडियो स्थापना गर्ने ।
प्रत्येक बस्तीमा इन्टरनेट जोड्ने ।
विशेष केन्द्रहरूमा ल्याण्डलाइन टेलिफोन सेवा संचालनको व्यवस्था मिलाइने ।
इन्टरनेटको सुविधा भएको पत्रपत्रिका तथा पुस्तक पढ्ने वाचनालय स्थापना गर्ने ।
सूचनाको पहुँच बढाउन पत्रिका प्रकाशन गर्ने, छापाखानाको स्थापना गर्ने ।
प्रत्येक टोल, बस्तीमा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने ।
जवाफदेहिता बहन गर्न हरेक योजनाहरूको सार्वजनिक सुनुवाइ, समीक्षा र परीक्षण अनिवार्य गर्ने ।
आम्दानीको स्रोत बढाउन पर्यटन क्षेत्रको विकासमा जोड दिने ।
अर्गानिक कृषि पर्यटन नै आर्थिक विकासको मूलआधार भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखी किसानकै घरखेतीमा
रिसोर्ट तथा होमस्टे विकासलाई बिशेष जोड दिने ।
टेम्के, सेल्मे र तावातालमा पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न च्यानडाँडा÷खिदिमामा बेशक्याम्प निर्माण गर्ने ।
पर्यटकहरूको लागि आवश्यक स्थानहरूमा सुविधा सम्पन्न होटल तथा रिसोर्टहरू निर्माण गर्ने ।
धिप्लुङ झरनाको प्रबद्र्धन गरी आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनाउने ।
सेल्मे टेम्के चखेवा मेरुङ साल्पा र सिलिचुङलाई समेटी मनोरम पदमार्ग (टे«किङ रुट) निर्माण गर्ने ।
टेम्केमा निर्माणाधीन भ्यू टावर सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निकायमा आवश्यक पहल गर्ने ।
तावाभन्ज्याङमा सुन्दर रमणीय तावाताल निर्माण गर्ने ।
मानेभञ्ज्याङ पोखरीलाई सुन्दर र हरियाली पोखरीको रुपमा प्रवद्र्धन गर्ने ।
हरेक वडामा एकएक वटा खेल मैदान बनाउने ।
गाउँपालिकामा खेलकुद परिषद् गठन गर्ने ।
विभिन्न खेल क्लबहरू निर्माण गरी खेल क्षेत्रलाई व्यवसायीकरण गर्ने ।
वित्तीय कारोवारलाई सरल बनाउन गाउँपालिकामा वाणिज्य तथा विकास बंैकको शाखा खोल्ने ।
एक घर एक बैंक खाता लागु गर्ने ।
युवाहरूलाई स्वरोजगारीको व्यवस्था गर्ने । पहिलो चरणमा युवा उद्यमीहरूलाई व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि उद्यम हेरी २० देखि ५० प्रतिशतसम्म बीउ पूँजी उपलब्ध गराउने ।
प्रादेशिक सरकार र सङ्घीय सरकारबाट अधिकतम स्रोत जुटाउन पहल गर्ने ।
जन्मदर्ता परिवार, घर र छिमेकी र बस्तीको फोटोसहितको विवरण संकलन घरघरैमा गर्ने । नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने सूचना उमेर पुग्नासाथ घरमै पुगेर दिने ।
पाँचवटै वडामा आधारभूत सर्वेक्षण गरी मानव विकास सूचकांक सहितको पाश्र्वचित्र तयार पार्ने ।
गाउँपालिकास्तरमा ५ वर्षे, १० वर्षे र २० वर्षे आवधिक योजना तर्जुमा गर्ने ।
प्रत्येक वार्डमा सहरको सूविधाप्राप्त एक बस्ती (सानो सहर) बसाउने । जमिनमा खेती आकासमा बस्तीको अवधारणालाई अगाडि बढाउन हरेक बस्तीमा सुरक्षित बहुतले घर निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।
घरजग्गाको रजिष्ट्रेसन, नामसारी, लेनदेनलाई सुलभ र सरल बनाउने ।
धनीपूर्जा घरघरमा वितरण गर्ने ।
गुण्डागर्दी, घुसखोरी र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने ।
नागरिकको जीउधन सुरक्षा र शान्ति अमनचयनका लागि प्रहरी सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउने ।
एक घर एक रोजगारी उपलब्ध गराउन सीपमूलक तालिमका लागि सीप केन्द्रको स्थापना गर्ने ।
गाउँपालिकाभित्र घर छाउने जस्तापाता उपलब्ध गराउने । जसमा पहिलो चरणमा शिल्पी समुदाय र विपन्न परिवारबाट सुरुवात गर्ने ।
सहरीकरणका लागि बेसी, लेक र कछाडका टोल बस्तीहरूमा आधुनिक सुविधा सम्पन्न एकीकृतबस्ती विकासको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
जोखिममा परेका घर परिवार र बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा सार्ने ।
प्रत्येक टोलबस्तीमा वातावरणीय सन्तुलनका लागि बलियो पोखरीहरू निर्माण र संभावित मत्स्य (माछापालन) विकासको योजना ल्याउने ।
भौतिक पूर्वाधारहरू तथा भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्दा प्राविधिक सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने ।
जनताको राय सल्लाह अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूबाट उपयुक्त स्थानलाई गाउँपालिकाको केन्द्र निर्माण गर्न पहल गर्ने ।
साकेला गाउँपालिकालाई जनसहभागितामा आधारित विकास निर्माण गरी नेपालकै उत्कृष्ट गाउँपालिका बनाउने ।
ससफो नेपालमा राजपाका दुई केन्द्रीय नेतासहित हजार प्रवेश
मदन पुरस्कार विजेता राजन मुकारुङले ससफोका उम्मेदवार रामसिंहलाई सघाउँदै
जनजाति महासंघले ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन अस्वीकार गर्यो
Posted by admin on Jun 16 2017. Filed under Breaking News, समाचार. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leavearesponse or trackback to this entry